Global Voices teny Malagasy » Shinoa Mpanao Sivana Mamafa Ny Porofo #PanamaPapers Ao Amin’ny Vohikala · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Avrily 2016 10:57 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fanampenam-bava, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna, Vaovao Mafana, GV Mpisolovava
Fianakavian'ny mpitondra ambony ankehitriny Xi Jinping sy ny mpitarika ambony teo aloha Li Peng manana orinasa an-dranomasina nokarakarain'i Mossak Fonseca. Sary avy amin'ny: ICIJ.
Raha toa ka miresaka #PanamaPapers izao tontolo izao , ny fiparitahana goavam-ben'ny tsiambaratelon'ny antontan-taratasin’ ny orinasa miorina ao Panama izay manampy mpanao politika maro hanafina vola amin'ny alalan'ny fananganana orinasa saritsariny an-dranomasina manerana izao tontolo izao, kosa dia tsy mahalala na inona na inona ny fisian'izany kosa ny ankamaroan'ny Shinoa.
Araka ny antontan-taratasy, izay nangonin'ny Fiarahana Misalahy Iraisam-pirenena momba ny Fanadihadian'ny Mpanao Gazety na International Consortium of Investigative Journalists  (ICIJ) , ny antontan-taratasy niparitaka dia mampiseho  ny orinasan-dranomasina mifandray amin'ny fianakavian'ny mpitondra ambony ao Shina , Xi Jinping, izay efa nivoady ny hiady toy ny “miaramilan’ ny kolikoly”.
Nosakan'ny anakana mpisivana tranonkala Shinoa tsy hahazo ny milina lehibe fikaroham-botoaty ny #PanamaPapers ary namafa ny fifanakalozan-kevitra rehetra milaza io fiparitahana io tao amin'ny media sosialy nanomboka tamin'ny 4 Aprily, ao amin'ny ezaka mba hitazomana ny ankamaroan'ny mponina Shinoa ao amin'ny tanibe tsy hahita  fa (araka ny ICIJ) “olona ao amin'ny fianakaviana raha kely indrindra valo amin'izao fotoana izao, na mpikambana teo aloha tao amin'ny Komity Maharitra Poliburo ao Shina , izay mpanapa-kevitra voalohany amin'ny orinasan-damaody, no manana orinasa an-dranomasina nokarakarain'i Mossack Fonseca.” Nitatitra ireo mpisera aterineto fa na dia ny mailaka nilaza ilay fiparitahana ary dia nosimbaina.
Namoaka tsy tapaka ny vaovao farany momba ny fepetran'ny sivana ao amin'ny Twitter ny mpisera monina ao Shina. Voalohany, nanjavona tao amin'ny motera fikarohana telo voalohany tao Shina ny fandikan-teny Shinoa ny amin'ny Panama Papers.
Sivana ao #China  – Valin'ny fikarohana #panamapapers  ao amin'ny Motera Fikarohana 3Voalohany: Baidu,360 Search &Sogou. @TobiasBasuki  pic.twitter.com/JjabpGXyt2 
Mampiseho fanamarihana mipongatra ambonin'ny mpitety eo amin'ny efijery ny pikantsarin'efijery izay miseho rehefa mikaroka ilay teny saro-pady ny mpisera milaza hoe: “Tsy miseho ny valin'ny fitadiavana tsy mifanaraka amin'ny lalàna, ny fitsipika sy ny politika, . Tsara raha manandrana manao fitadiavana amin'ny voambolana hafa mifandraika aminy. “
Efa voafafa tao anatin'ny segondra vitsivitsy tao amin'ny Weibo ireo voambolana ny vaovao ary ny adihevitra hafa mifandraika aminy rehetra, :
Ao anatin'ny Rindrin'Afo Lehibe, ny tena mampihomehy [mitranga ilay sivana]. Na ny vaovao momba ny olona ao Islandy mitoraka atody sy akondro amin'ny Lapan'ny Fanaovan-dalàna aza dia nofafana. Ny lahatsoratra rehetra izay mahakasika ny tsiambaratelon'ny banky, ny famotsiam-bola sy Panama dia voafafa tao anatin'ny segondra vitsy! Adala ry mpisivana aterineto, mamafa hatrany. Vao avy nanampy ekeko tamin'ny lahatsoratra aho dia nanjavona ilay izy. Toa hoe ny Antoko Kaominista Shinoa no mameno ny lavaka rehetra ao amin'ny rindrina. Manoro hevitra an'ireo izay any ivelan'ny rindrina aho mba hanampy ny namana ao anatiny hahafantatra ny marina.
Na dia ny mailaka tsy miankina aza toa eo ambanin'ny fanasivanana teny saro-pady:
Ny mpitantana vohikala tsy maintsy mifehy ny vavany sy mamafa ny votoaty rehetra mifandray amin'ny @Panamapapers avy amin'ny fanehoan-kevitra rehetra ao amin'ny Weibo sy Wechat. Nisy mpanao gazety avy ao an-toerana ao Shina nitaraina fa nanakana azy ireo amin'ny “fiakarana ny rindrina” ny fikambanan'ny haino aman-jery. Ho an'ireo izay afaka miditra Wikipedia,dia niezaka ny hanaparitaka ny vaovao amin'ny alalan'ny rakitra manaraka ny mailaka , fa nilaza ny namany ao amin'ny manda fa tsy afaka misintona ny antontan-taratasy (satria voasivana ny mailaka), na dia ny paingorina amin'ny alàlan'ny WeChat aza dia voasivana.
Manondro ny toromarika sivana niporitsaka fa miasa amin'ny heriny manontolo ny propagandin'ny manam-pahefana (amin'ny alàlan'ny China Digital Times ):
Faritany X Biraom-baovaon'ny Aterineto: Tadiavo ary fafao ny tatitra natonta momba ny Taratasin'i Panama. Aza manaraka ny votoaty mifandraika amin'izany, tsy an-kanavaka. Raha misy fitaovan'ny haino aman-jery vahiny manafika ao Shina ka hita ao amin'ny tranonkala, dia ho saziana mafy izy. Natolotra am-bava Ity toromarika amin'ny tonia mpamoaka lahatsoratra ity. Azafady, tanterahoy avy hatrany. (4 Aprily 2016)
Tranonkala X: Azafady esory ilay lahatsoratra hoe “Taratasin'i Panama tafaporitsaka”, Putin Ao amin'ny raharaha maizin'ny fanadiovam-bola 200 Tapitrisa dolara amerikana” sy ireo tantara mifandraika amin'izany avy amin'ny Pejy Fandraisana [tranonkala sy mpamoaka vaovao] (anisan'izany ny mpanjifan'ny [media sosialy]), ary afindrao ho any amin'ny faran'ny tranonkala ny lahatsoratra. (4 Aprily 2016)
Ahitàna ny zaodahin'ny filoham-pirenena Shinoa amin'izao fotoana izao Xi Jinping, ny zanakavavin'ny Praiminisitra Shinoa teo aloha Li Peng, ny zafikelin'i Jia Qinglin izay niala tamin'ny Komity Maharitry ny Birao Politika tamin'ny 2012, ary mpiara-miombon'antoka amin'ny raharaham-barotra Gu Kaila, ny vadin'i Shinoa mpanao politika teo aloha Bo Xilai izay voaheloka higadra mandra-pahafatiny noho ny kolikoly tamin'ny 2013 ny tatitra navoakan'ny ICIJ .
Ity ambany ity ny antsipirian'ny manam-pahefana Shinoa hita ao amin'ny tatitra ICIJ :
Li Xiaolin zanaka faharoa sady vavitokan'ny Praiministra Shinoa teo aloha Li Peng. Filoha lefitry ny China Investment Power Corporation izy, izay orinasam-panjakana mamokatra herinaratra , ary niasa ho solontena tao amin'ny Vaomiera Mpanolon-tsaina Ara-politikan'ny Vahoaka Shinoa na CPPCC, rafitra mpanolo-tsaina iray ao amin'ny mpanao lalàna Sinoa izy. Nantsoina hoe “Mpanjakavavin'ny Fahefana” izy ao Shina.
Deng Jiagui, izay nanankarena tamin'ny fanangana-trano, lasa ” Andriana Mena” tamin'ny 1996, fony izy nanambady an'i Qi Qiaoqiao, zanakavavin'i Xi Zhongxun, iray amin'ireo revolisionera mahery fo ao Shina ary manam-pahefana ambony teo aloha. Ny zandrin'i Qi Qiaoqiao lahy, Xi Jinping, izay filohan'ny Shina ary filohan'ny Antoko Komonista ao Shina. Nisy tatitra fanadihadiana nataon'ny Bloomberg News tamin'ny 2012 nanambara fa Deng sy ny vadiny dia nanana an-jatony tapitrisa dolara avy amin'ny raharahan'ny fananana mifaka (trano sy tany), zara lova ary fananana hafa.
Jasmine Li lasa malaza ao Shina taorian'ny fakana sary azy nanatrika ny lalao tsipy kanetibe ho an'ireo izay vao manomboka tany Paris tamin'ny 2009 miaraka amin'ny vehivavy mpanankarena tanora namana hafa sy manana fifandraisana ara-politika . Nianatra tao amin'ny sekoly kilasimandry any Etazonia i Li, ary nahavita ny mari-pahaizana amin'ny taona faha-telo tao amin'ny Oniversite Stanford ao California. Rehefa niala ny oniversite i Li dia nanomboka niasa tao amin'ny tontolon'ny zavakanto ho lefitr'ilay Shinoa mpanankato Cai Guoqiang ao New York ary taty aoriana dia niasa ho “mpampifandray Tranom-pampirantiana” ho an'ny zavakanto Artsy izay mivarotra amin'ny aterineto ao New York sy Hong Kong. Fahefatra amin'ny laharana ara-panjakana ao Shina amin'ny Komity Maharitry ny Birao Politika mandra-pialany tamin'ny 2012 ny raibeny, Jia Qinglin.
Ny mpanao maritrano Patrick Henri Devillers dia mpiara-miasa amin'ny raharaham-barotr'i Gu Kailai, vadin'ny mpanao politika shinoa teo aloha fantatra amin'ny halatra avo lenta Bo Xilai. Nihaona tamin'i Gui i Devillers raha mbola manam-pahefana tao amin'ny Antoko Komonista miandraikitra ny orinasa ao amin'ny seranan-tsambo ao an-tanànan'i Dalian avaratratsinanan'i Shina ny vadiny. Samy talen'ny Adad Limited, orinasa miorina any Angletera i Devillers sy i Gu , fa nanampy an'i Devillers ihany koa i Gu hanorina orinasa an-dranomasina miafina izay nampiasaina mba hividianana toeram-ponenana mihaja any amin'ny faritra atsimon'i Frantsa. Nosamborina tao an-tranony ao Kambodza i Devillers tamin'ny Jona 2012 noho ny fangatahan'i Beijing ary nandany herinandro maromaro tany am-ponja tany Shina alohan'ny nanafahana azy. Nampiasaina fitsarana kolikoly an'i Bo Xilai tamin'ny 2013 ny fijoroana vavolombelona nataony.
Araka ny ny tatitra farany  nataon'ny BBC, manana havana mitazona orinasa an-dranomasina tafiditra ao amin'ny antontan-taratasy tafaporitsaka ny mpikambana roa hafa avy ao amin'ny Komity Maharitry ny Birao Politika, Zhang Gaoli sy Liu Yunshan. Liu Yunshan no lehiben'ny fampielezan-kevitra any Shina.
Hatreto, tsy nisy valinteny ofisialy momba ny Taratasin'i Panama, fa ny mpitondratenin'ny mpikambana ao amin'ny antoko, ny Global Times, no nanamafy fa misy “hery matanjaka ” miasa ambadiky ny sehatra, miampanga ny fiparitahana ho tetidratsy hamelezana ny mpitondra firenena tsy-Tandrefana, ary milaza fa Vladimir Putin no lasibatra voalohany indrindra amin'io fiporitsahana io.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/04/09/81132/
 China Digital Times : http://chinadigitaltimes.net/2016/04/minitrue-panama-papers-foreign-media-attacks/
 tatitra farany: http://www.bbc.com/news/world-asia-35962326
 hery matanjaka: http://www.globaltimes.cn/content/977162.shtml